Cunto: Ha kudubin Google si aad neceb uga dhigto boggaaga
Jack Miller, Maamulaha Guud ee Maareynta Sare ee Macaamilka, wuxuu kuugu digayaa in Google uu samayn karo bartaada ama boggagaaga natiijooyinka raadinta haddii aad isku daydo inaad ku xakameyso gaadiidka tayada yar ama keyword keywords. Tusaale ahaan, haddii aad soo saartid gaadiidka badan ee shabakadaada oo ay ku sii kordheyso dhawr qaybood, Google ayaa lagu soo wargalin doonaa taas, iyo dhammaan boggaga iyo boggaga boggagaaga ayaa ugu dambeyntii ka baxaya natiijooyinka raadinta. Waxa ugu xunna waa in aan marnaba laguu digin - wholesale fascinator hats. Adiga oo kaliya ayaa lagaa lumay internetka, sumcada website-kaaga waa la burburin karaa.
Haddii aad waligaa iibsatay xiriiriye qof ama shirkad magac u leh SEO, waxaa jira fursado ay Google ku ciqaabi doonto goobtaada. Haddii aad dhalinayso boqolaal kun oo xiriir iyo isku day inaad ku timaado bogga kowaad, weligaa ma gaari kartid natiijooyinka la rabay. Google waxay aaminsan tahay in iibsashada xiriirintu ay tahay khadad madow oo SEO ah iyo dhammaanba dhammaan 14 makiinadaha raadinta u yeeraan spam. Meelaha aan ixtiraamka ahayn iyo qaababka warbaahinta bulshada ayaa bixiya xiriiro lacag la, aan ah oo aan ku habbooneyn. Markaa, waa inaadan waligaa raacin mid ka mid ah fursadahaas.
Ka mid noqoshada Nidaamyada Xiriirka khaldan
Haddii aad ku soo biirtay khadka tooska ah ee khadka ah, waa inaad iska saartaa sida ugu dhakhsaha badan. Qaar badan oo ka mid ah wicitaanada ayaa kuugu soo diri doona URL-yadaada, taasina waxay tahay waxa Google ku diidan yahay..Mashiinnada raadinta waxay tixgeliyaan inta ugu badan werarada sida spam tayadoodu hooseeyso, markaa waa inaadan waligaa ku dallacin oo raadi tusaalayaasha tayada kaliya. Matt Cutts oo ka socda Google ayaa sheegey in linkers link ay yihiin mid ka mid ah qaladaadka ugu caansan uguna badan ee SEO ah.
Haddii aanad maqlin suuq madow, aan kuu sheego in ay jirtay muddo sanado ah. Fikraddu waa in la qoro maqaalado, tarjumo noocyada kala duwan iyo samaynta isbedel yar oo ereyada ah. Kadibna bloggers waxay soo gudbiyaan qodobbada ku yaal goobo kala duwan oo loogu talagalay dhabarka. Si kastaba ha noqotee, bogagga internetka iyo ganacsiyada leh, ha ku raacin doorashadan. Haddii aad aaminsantahay in Qaybta Base ama E-Zine ay keeni karaan natiijooyin tayo leh, waxaad samaynaysaa qalad aad u weyn oo laga yaabo in aad aragto websaydhkaaga ku waayey natiijooyinka raadinta raadinta
Waa ammaan in la yiraahdo walxaha muhiimka ah ee muhiimka ah ma aha mid saaxiibtinimo ku ah websiteka qiimaha kasta. Haddii aad isticmaaleysey ereyo iyo ereyo badan oo ku jira hal cutub, hal google ayaa si deg deg ah hoos u dhigi doonta darajadaada wuxuuna dhaawici karaa sumcadda boggaaga. Qodobka muhiimka ah macneheedu waa isticmaalka erayada ereyada badan oo badan iyo ka badan oo ku jira mawduucaaga, iyo haddii aad rajeyneyso in ay kuu heli doonto darajo wanaagsan, maaha wax faa'iido ah.
qoraalka aan caadiga ahayn
Google ee dareenka koowaad waa ka takhalusidda qoraalka aan caadiga ahayn. Haddii aanad waxba ka ogaanin, aan kuu sheego in qoraallada calaamadeysan ay u gudbinayaan qoraalka ku dhex jira xiriir gaar ah. Waxaa loola jeedaa in lagu dhiso xiriiro website-ka. Google ayaa dhawaan soo cusbooneysiiyey algorithm, iyo qoraalada aan caadiga ahayn ayaa hadda loo tixgeliyaa sida spam.
Waa in aad had iyo jeer baartaa boggaga internetka ee xiriirada jabsan oo sax ah hannaanka HTML. Ku soo celi habkaan saddex goor toddobaadkii si aad u hubiso in boggaagu uu raacayo siyaasadaha Google. Makiinadda raadiyuhu waxay u diidaan bogagga internetka iyada oo la xidhiidha isku-xirnaanta jaban ama aan faa'iido lahayn, markaa waa inaadan waligaa raacin wixii kharash ah.